Fitsaram-bahoaka :: Roa lahy novonoina teo anoloan’ ny biraon'ny kaominina • AoRaha
Nisehoana fitsaram-bahoaka tany Tanambao Daoud Sambava ,omaly maraina. Namoy ny ainy vokatry ny tora-bato sy vely kibay nataon’ andian’olona teo amin’ny biraon’ny kaominina ny lehilahy roa, manodidina ny telo­polo sy efapolo taona. Noam­pangain’ireo mpamono ho tompon’antoka tamin’ny fahafatesana vehivavy lehibe iray teo an-tanàna izy roa lahy ireo. Tsy tana ny hateze­ran’ny olona sy ny fianakavian’ ny mana-manjo ka niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka izao.
Tranga roa mampihoron-koditra no niseho tao amin’ity kaominina Tanambao Daoud, afak’omaly hariva sy omaly maraina, ity. Hita faty avy nodorana teo amin’ny tanimboly ny vehivavy iray, mano­didina ny dimampolo taona, ny alin’ny alatsinainy. Mbola nahamay ny razana ary hita teo akaiky teo ny hazo nando­rana azy, araka ny fanampim-baovao voaray. Tonga nanao ny fizahana sy nanao ny angom-baovao teny an-toe­rana ny zandary. Teo ihany dia nisy ny fisamborana olona noahiahiana. Noentina notazomina tany amin’ny biraon’ ny kaominina ny lehilahy roa. Niambina azy ireo tao ny avy amin’ny polisim-bohitra na «Quartier mobile» sy ny fiana­kavian’ilay vehivavy hita faty.
Ben’ny tanàna voakasi-tanana
«Fantatra fa nanana disa­disa momba ny ady tany tamin’ilay vehivavy namoy ny ainy ireo lehilahy roa voatazona ireo. Efa tsy hita sy noka­rohina nandritra ny heri­nan­dro io vehivavy io kanjo izao hita faty izao. Teo amin’ny tany niadiana no nahitana ny razana», araka ny fanampim-panazavan’ny zandary any an-toerana.
Nanohy ny fikarakarana ny razana sy niandry ny mpitsabo hanao fizahana teo amin’ny toerana nahitana izany ny zandary, nandritra ny alina. Lavidavitra eo ny biraon’ny kaominina nitazonana an’ireo voarohirohy. Omaly tokony ho tamin’ny dimy ora maraina no nirohotra nihazo ny biraon’ny kaominina ny olona marobe nitaky ny hamoahana sy hamo­noana an’ireo voasambotra.
«Niezaka nandresy lahatra an’ireo olona ireo ny ben’ ny tanàna saingy voakasi-tanana ihany koa. Nasaina nandositra izy, avy eo. Maty tsy tra-drano kosa izy roa lahy. Tara ny faha­tongavan’ny zandary noho ny fahalaviran’ny toe­rana sy ny faharatsian’ny fifan­draisana an-telefaonina nisy teo amin’ny roa tonta», hoy ihany ny mpitandro ny fila­minana.
Efa samy natolotra ny fianakaviana ny vatana mangatsiaka telo: ny an’ilay vehivavy hita faty sy ny azy roa lahy matin’ny fokono­lona. Tsy hitazam-potsiny fa hanao fanadihadiana momba an’ity fitsaram-bahoaka ity kosa ny zandariamaria.
Fanafihana teny an-dalana Voatifitra teo am-pandosirana ilay gadra nentin’ny zandary
Asan-jiolahy :: Lehilahy notifirina teo imasom-badiny